Akụkọ - Somefọdụ nwere uche dị mma gbasara akwa akwa akwa akwa
ihe nkpuchi yoga
Ọnọdụ yoga agbatị
tpe yoga ute
okwuchi yoga ute
pu roba yoga ute
eva yoga ute
Yoga ụkwụ anọ
Yoga nhicha ahụ
eva ụfụfụ ute
eva mgbaghoju anya ute
Ngwongwo egwuregwu ndi ozo
Smụaka na-akpọ ute
Somefọdụ nwere ọgụgụ isi banyere akwa akwa linen
Ngwongwo linen yoga bụ akwa yoga nwere ahịrị. A na-agbanwe ya na ndabere nke ụdị akwa yoga. Ọ na-eji sistemụ yoga na-eme ka ọ bụrụ onye na-achị achị n'echiche nke onye nkụzi yoga n'elu akwa iji nyere ndị na-eme ihe omume ịmụrụ ezigbo yoga asanas. Ọ dịkwa mma nye onye nkuzi iji duzie asha ahụ onye na-eme ihe na-ezighi ezi. Ọ bụghị naanị na ọ nwere ọrụ niile nke akwa yoga, mana o nwekwara ọrụ nke inye aka na nduzi.
Ojiji eji eji eme akwa yoga
Kwụpụ 1: chọta akara nke obe
Anyị na-ewere akwa akwa akwa linen ahụ a tọrọ n'ala dị ka akara aka ma guzoro n'etiti akwa ahụ. Na ute ahụ, e nwere obe kwụ ọtọ na yoga. Mgbe anyị na-eme yoga ọnọdụ na ute, anyị ga-akpa-eji nke a cross center akara dị ka ụkpụrụ.
Kwụpụ 2: Kpọmkwem ntụnyere
Istọgbọala ute n’elu ala, ihu ndị ahụ dịkwa n’ihu gị. Ihe asana ichoro ime bu ichota akara ihu n'ihu n'elu akwa ute, wee tinye ya ngwa ngwa ma dozie ya na onodu kwekọrọ, wee mee ezi mgbanwe dika ume nke aru. Ọ bụghị ihe magburu onwe ya na onye nchịkwa ahụ nwere ike mezue yoga asana n'onwe ya!
Post oge: Apr-25-2021
Nye gị ngwaahịa na ọrụ kacha mma
Onye njikwa ahia mba ofesi: Tony
China Tianhui Int Group © Copyright - 2010-2021: Yancheng Tianzhihui Mat Co., Ltd. Ngwaahịa na-ekpo ọkụ, Sitemap
Yoga mat N'ogbe, yoga ute price, ihe nkpuchi yoga, nnukwu yoga ute, Onyinye Yoga, kacha mma yoga ute,